23/05/2012 Taorian�ireo manamboninahitra kolonely mivondrona ao amin�ny �Cordination Nationale des Officiers� dia fantatra izao fa hanao fanambarana ihany koa amin�ity anio ity ireo jeneraly misotro ronono, mitondra ny anarana hoe �Groupe d�Ankerana�.
Eny Ambohibao, ao amin’ny trano fonenan’ny jeneraly Désiré Rakotoarijaona no voatondro fa hanaovana izany fanambarana izany. Tsy mbola fantatra mazava ny votoatiny, saingy inoana fa tsy hivaona amin’ny zava-mitranga eto amin’ny firenena ankehitriny. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny anaran’ireto jeneraly misotro ronono ireto, ankoatry ny jeneraly Désiré Rakotoarijaona, izay efa tsikaritra hatramin’izay tamin’ny fanehoan-keviny fa tsy dia mankasitraka firy ny fomba nitantanan’i Andry Rajoelina ny tetezamita. Inona no mety ho tohin’izao fanambarana misesisesy ataon’ny manamboninahitra am-perinasa sy misotro ronono izao ? Mba misy mihaino ihany ve izy ireo sa dia manao antso an-tany efitra fotsiny ? Mahaliana ny maro koa ny hoe : mety ho samborina ve ireo miaramila manao fanambarana ireo, ary inona koa ny hetsika mety hataon’izy ireo raha toa ka tena manao be marenina ny fitondrana tetezamita ?